WASIIR MAAREEYE: “Kufsiga Afgooye ka dhacay waxaa maal geliyay hay’ado caalami ah oo haddii la baaro…” | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA WASIIR MAAREEYE: “Kufsiga Afgooye ka dhacay waxaa maal geliyay hay’ado caalami ah...
WASIIR MAAREEYE: “Kufsiga Afgooye ka dhacay waxaa maal geliyay hay’ado caalami ah oo haddii la baaro…”
Wasiirka Warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa si kulul uga hadlay kufsi laba gabdhood oo caruur ah loogu geystay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Gabdhahaan oo da’doodu kala ahayd 3-jir iyo 4-jir ah, wuxuu sheegay Wasiir Maareeye in dhacdadaasi aanu ahayn dhaqan lagu yaqaan Soomaalida oo ah dad Muslim ah, hase yeeshee hay’ado caalami ah ay maalgeliyeen si loo halleeyo qiyamka iyo dhaqanka suuban ee ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed.
“Kufsiga Afgooye ka dhacay waxaa maalgeliyay hay’ado caalami ah oo haddii la baaro la heli karo magacyadooda” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Dowladda Soomaaliya oo hoosta ka xariiqay in dhacdadaasi ay tahay weerar qaawan oo lagu soo qaaday sucmadda iyo sharafta dalka iyo dadka.
Wasiir Maareeye ayaa ka dalbaday ciidamada Milateriga iyo maamulada dalka ka jira inay kahortagaan hay’adaha shisheeye ee ku lugta yeesha abaabulka kufsiga loo geysanayo caruurta yaryar, isla markaana waxa uu hoosta ka xariiqay in dowladdu baaritaan ku sameyneyso cid kasta oo ku lug yeelata falkaasi foosha xun.
“Xayawaan way ka liitaan kuwii ka dambeeyay falka lagu kufsaday caruurta gabdhaha ah ee ka yar 5-sano” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya oo ka dalbaday ciidamada Xoogga inay gacanta ku soo dhigaan kooxaha la shaqeeya hay’adaha shisheeye ee iyagu ka dambeeyay falkaasi si sharciga loo horgeeyo.
Carada Wasiirka Mareeye ayaa ku soo beegmeysa xilli hay’adaha u dooda xuquuqda haweenka iyo kuwa xuquuqul insaanka Soomaaliya ka werinayaan tacadiyo kala duwan oo loo geysto dadka rayidka ah.
Dembiyada ay hay’adaha caalamiga ah diiwaan geliyaan waxaa ka mid ah kufsiga haweenka iyo shacabka waxyeelada ka soo gaarto goobaha ay ka dhacaan dagaallada u dhaxeeya ciidamada huwanta ah, kuwa argagixisada iyo kuwa qabiilka ku saleysan.
Dowladda Federaalka inta badan wax jawaab ah kama bixiso warbixinada iyo xogaha ay baahiyaan hay’adaha shisheeye, iyadoo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka si weyn ula yaaban yihiin wararka aan wanaagsaneyn ee meel ka dhaca ku ah dhaqanka ay caanka ku tahay Soomaalida oo hay’adaha caalamiga ah ka gudbinayaan.